Maitiro Ekugadzirisa Yakakundikana BSI Enclosure | la-manette.com
Maitiro ekugadzirisa inotadza BSI yakavharirwa
18 novembre 2021 ndima JEAN-MICHEL CAPPIN
Mota zhinji dzemazuva ano Peugeot / Citroën dzinotambura nekutadza kweBSI
chikwereti mufananidzo : zvakanaka
(Yakavakirwa-mukati Systems Interface). Izvi zvinowanzoita kuti mota isatange, kutadza kwemidziyo kana kuratidzwa kwehupfumi mode pane chiridzwa. Kazhinji, iyo data mumayuniti aya inoshatiswa, zvichikonzera kurasikirwa kweecu synchronization.
Izvi zvinogona kukonzerwa nezvimwe zvezvikonzero zvinotevera:
Low bhatiri voltage.
Spikes in tension.
Kuverenga pini kodhi.
BSI kugadzirisa kufukidzwa kusvika 2021 paCitroën nePeugeot mota. Isu tinobatawo nePSA mota seFiat Scudo nezvimwe. Ndapota tifonere kuti tiwane kuvharwa kwemotokari kuzere.
Isu tinokwanisa kugadzirisa / virginize iyo BSI control modules, iyo inotitendera kuti tivagadzirise kumota yako. Kana iwe ukatitumira yako BSI mayunitsi, anozoda kurongwa mumotokari yako, diagnostically. Kodhi yekuchengetedzwa kwekuchengetedza inodiwa pakuronga. Kana kadhi rekuchengetedza rarasika, tinogona zvakare kudzoreredza iyi data kubva kuBSI kana injini yekudzora module.
Unogona kutitumira BSI yako yekugadzirisa, kubhadhara nekuendesa kubhengi chete panguva ino.
Isu tinogadzirisawo zvepakati zvekukiya nyaya dzinowanzo kuwanikwa paPeugeot 206 Partner uye Citroën C2 C3 Berlingo mota. Kiya asi kwete kuvhura, tinogona kuigadzirisa ne 100% kubudirira kwehuwandu.
Iwo mayunitsi anokwidziridzwa pabhenji uye anoongororwa uchishandisa azvino maturusi kubva kuPeugeot / Citroën vatengesi. Kuenderera mberi kwekutarisa, zvikamu zvakaedzwa, kuchenesa uye activation yemabasa
Verenga zvakare: Maitiro ekutora skrini paSamsung Galaxy A21s
Yakazara coding uye hurongwa huripo hwebsi / ecu / kiyi seti, mayunitsi anozopetwa uye akakodha, achivaita plug uye kutambira mota yako pakudzoka. Iko hakuna chikonzero chekuita chero kiyi coding kana diagnostic kana yako ECU set yagadziriswa.
Yakanonoka BSI Johnsons Kudzora mayunitsi anowanzo kupinda mubhoot modhi, mushure kana apo nyanzvi yakaedza kuverenga pini kodhi.
kana kugadzirisa mileage nemudziyo wakaderera. Izvi zvine mhedzisiro yekuvhara BSI uye vanhu vazhinji vanofunga kuti BSI haigoneke uye kuti yuniti nyowani inofanira kutengwa kubva kumutengesi mukuru. Tinogona kudzoreredza aya mayunitsi uye kuita kuti ashandiswe zvakare, mune dzimwe nguva angangoda reprogramming uye mune mamwe anodzoserwa kuhurongwa hwekushanda.
Isu tinogona zvakare kuyedza zvizere iyo, ECU, makiyi uye maremote pabhenji.
Iyi sevhisi inotitendera kuti tiedze zvizere immobilizer system sezvo ichishanda pamotokari yako. Mota zhinji dzePeugeot neCitroën dzakavharwa mushure megore ra2002. Iyo tebhu iri pazasi ndeye test network yakazara. Chero basa rekugadzirisa rinounza mari yakawedzerwa kuwedzera kune mari yekuedza. Ndapota fona kuti uwane mirairo paunenge uchiodha sevhisi iyi. Sarudza sevhisi iyi kubva pane menyu pazasi.
Peugeot 307 BSI Virginise £145.00
Peugeot 406 BSI Virginise £145.00
Citroen C2, C3, C4 BSI Virginise £125.00
ECU Pincode Kuverenga £ 65.00
Xsara Picasso BSI Virginise £145.00
Peugeot 206,207 BSI Virginise £125.00
PSA JC BSI Kudzorera £ 140.00
BSI Kuongorora / bvunzo £ 70.00
Peugeot Citroen Network Test £ 100.00
Kugadziriswa kweseti diki yeECUs £ 145.00
Kugadziriswa kweavhareji ECU set £ 180.00
Yakakura saizi ECU gungano kugadzirisa £ 225.00
Peugeot Citroen Siemens BSI yepakati kukiya kugadzirisa £ 130.00
Verenga zvakare: Maitiro ekutamba Roblox paOculus Kuda uye Kuda 2
Unogona kutumira muBSI yako kana ECU kuti igadziriswe, kubhadhara nekubhadhara kubhengi kana mari panguva ino. Yese yemitengo iri pamusoro apa pamwe nemari yekudzoka.
Pakutumira BSI / ECU yako kuti iongororwe kana kugadziriswa, ndapota sanganisira nhamba yekuvaka kana nhamba yekuzivikanwa yemotokari. Zvakare tsananguro yechero kukanganisa kana matambudziko uye yekuonana ruzivo.
Muenzaniso wenzvimbo yekuvaka nhamba inoratidzwa pazasi.
Yakachipa Xbox One Controller - Yakanyanya Kuchipa Xbox One, Xbox Series X, S Controllers